Nhema Bathroom Faucet Ine Yakaparadzaniswa Handle Swivel Spout
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Nhema Yekugezera Faucet Ine Yakaparadzaniswa Handle Swivel Spout
Rated 4.91 Kunze kwe5 yakavakirwa 23 kasitoma ratings
Solid yendarira zvinhu zviri nani kana ichienzaniswa nedzimwe simbi
Hapana chikonzero chekuve nehanya nezve ngura, nyaya dzeku kutu.
Yakakwirira mhando zvinhu, kureruka kwekuchengetedza, yakakwirira kudzikama, yakareba nehupenyu.
2320300B mirairo yekuisa
Kusarudza imba yako yekugezera faucets 2320300B
Paunenge uchigadzira kana kugadzirisazve imba yako yekugezera, haugone kurerutsa maitiro ezvimbuzi zvekugezesa. Izvi zvakanyanya pamwe ndizvo zvidiki zvinhu zviri mubhavhu rako rekugezera, asi zvakadaro ndizvo zvezvinhu zvakasikwa zvinotaridzika mukamuri yekugezera. Chero ani zvake anopinda muimba yako yekugezera, otomotarisa pamhepo yekugezera faucets pakutanga. Naizvozvo ndezve kukosha kwazvo kusarudza imba yako yekugezesa faucets mushe. Bathroom faucets inouya akawanda masitayiti, chimiro uye dhizaini. Kusarudza yakakodzera imba yekugezesa kunogona kuomera vamwe. Fairet yekugezera chaipo inogona kupa imba yako yekugezera yekubata yainyatsodiwa. Iyo inogona kuita yakazara.difference mukuonekwa kweimba yako yekugezera. Asi kunyanya pane zvese, zvekugezesa fainiet anofanirwa kuenderana nemaitiro ese ekugezera. Nekudaro iwe ungade kufunga nezvezvinhu zvese zvepfefa yekugezera zvauri kufunga kusarudza. Nekudaro, ngatirege kukanganwa kuti kudhiza kana kugadzirisazve imba yako yekugezera ndiyo inonyanya kuitika chiitiko chinonakidza. Iwe unokwanisa kurongedza imba yako yekugezera nyangwe izere kuravira kwako. Isu ngatibatsirei isu nechitema chedu chakapararira imba yekugezera faucet.
Stylish yakapararira yekugezera faucet
Musiyano mukuru pakati pefafitera yekugezera yakapararira uye zvimwe zvigadziriso, chinzvimbo chemawoko, ose ari kupisa uye anotonhora. Pane yakapararira yokugezesa faucet matura anoiswa parutivi rumwe norumwe rwehupuki pacharo. Pamukati setet faipits semuenzaniso, iwe unoshandisa gomba rimwe rakakandwa mune akanyura. Kune rimwe divi, paine imwe faucet gomba semuenzaniso, unogona kudzora mvura inopisa neinotonhora nehuku rimwechete chete. Chaizvoizvo, ine faupet yekugezera yakapararira iwe unofanirwa kuchera makomba matatu mubhavhu rekunyura uye unodzora mvura nemaoko maviri akaparadzaniswa maviri nemvura inopisa uye inotonhora. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kudzora chaizvo tembiricha yemvura. Kusarudza faera rakazara yekugezesa faucet, iwe unopihwa zvakasiyana siyana uye unopedza. Iwe unogona kugadzira kwakakomba mune yako décor neiyo nhema dema. Izvi zvichanyatsogadzira imba yako yekugezesa faucet chinhu chinobata ziso mumba mako yekugezera. Kunze kwekuda kwako kunofanirwa kusarudza mashandiro. Unoda chii kuti chena chakapararira yekugezera faucet kuti uite? Paunoita sarudzo, ingosarudza dema rakapararira rekugezesa faucet seinzvimbo nyowani yekutarisa yako yekugezera yekutsva.
Nhema yakapararira yokugezera faucet
Nhema zvingave sarudzo inoshamisira mune yako yekugezesa yekushongedza. Kunyanya kana paine zvimwe zvinhu zvitema mukamuri yekugezera. Iyo dema yakapararira yekugezera faucet inosangana pamwe chete neimwe yakasara yekugezesa dhizaini yako. Zviripachena kuti iwe unogona kuita mutsauko neakasviba akapararira yekugezera faucet muimba yako yekugezera. Kutanga pane zvese nekuti madema akapararira ekugezera faucets akakosha. Sezvo vasiri vanhu vazhinji vanesimba kushandisa ichi chakashinga dhizaini yavo yekugezera, unogona kusarudzika imba yako yekugezera neiyi nhema yakapararira yekugezera faucet yeWOWOW. Kwete munzvimbo yekupedzisira nekuti inopa iyi yakasikwa yekutarisa mukamuri yekugezera yako inosimudza yakazara kuti isarerutsa. Imba yako yekugezera ichave isiri kure nechiyero nechitema chakapararira chekugezera faucet yeWOWOW. Pasina mubvunzo chero munhu anoona yako yega yakasarudzika chisikwa chisikwa, ichakatyamadzwa nayo. Uye kwete munzvimbo yekupedzisira nekuda kweiyo inotonhorera yakasviba yakapararira yekugezera faucets iwe wakasarudza.
Pamberi pekero iwe unofanirwa kutora inoshanda application mukufunga. Ndechipi chiri chinangwa cheimba yekushongedza yakarongedzwa iyo isingashande zvaunoda? Nenzira yakajeka iwe unosarudza maitiro aunoda kuti ako emidziyo yekugezera ashumire zvishuwo zvako. Zvakafanana nechikamu chekugadzira, fairiet yekugezera ishoma nehukuru hwakakura. Izvo zviri pachena zvinoshanda kune kushanda pamwe.
Kubatanidza zvakanaka pasipo yekugezesa faucet
WOWOW dema yakapararira yekugezera faucet yakakodzera kune vazhinji yekugezera. Asi pachokwadi inofanirwa kuve imwe yakabatana chikamu nezvimwe zvakasara zvekugezera dhizaini. WOWOW saka ine inofananidza bhenji yokugezera faucets, semuenzaniso nhema yekugezera faucets, dema yekugezera kabati uye madema emba yekugezera. Nenzira iyi iwe unogona kugadzira imba yako yekugezera zvakabatana nevamwe vatema yekugezera faizets. Iwe uchaita fungidziro yakakura nayo! Uye kunze kwezvo, iyo dema yakapararira yekugezera faucet yeWOWOW ichakupa iwe kushanda kwaunoda. Iyi dema yakapararira yekugezera fenicha yakagadzirirwa kugadzira yazvino, minimalistic uye asi yazvino chigadzirwa chigadzirwa chemugadziro yekugezera. Chero iyi nhema yakasviba yekugezera faucet yeWOWOW zvese zviri glossy uye yakatsiga zvakare. Iyo yakabatanidzwa pop-up Stopper yakagadzirirwa kuve yakagadzirirwa, uye zvakadaro inokupa iwe laini kutonga. Chero ani zvake anoona iyi chena yakapararira yekugezera faucet achafadzwa nekugadzirwa kwayo uye kushanda kwayo. Izvo chaizvo zvakagadzirwa nechiratidzo chakajeka uye chakasiyana. Yakakwirira-yepamusoro nzvimbo yekugezera faucet yekunyura kwako, Sezvo nezvigadzirwa zvayo zvese, WOWOW inoshandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zveiyi yakapararira yekugezera faucet. Unoona izvi semuenzaniso kana iwe uchishandisa zvigamba zveiyi yakazara yekugezera faucet. Iyo mhando inovimbisa kugadzikana kuri nani uye hupenyu hwakareba kushandiswa. Iyo yakakosha yakakwira materu spout yakagadzirwa nenzira semuenzaniso iyo madonhwe haana kutemwa nekuda kwehurefu hwayo. Kumusoro kweiyi yakapararira yekugezera faucet yakasviba, asi iyo inobatanidza yakagadzirwa nendarira. Midziyo yemhangura yakasimba zvirokwazvo iri sarudzo iri nani kana ichienzaniswa nezvimwe zvinhu zvesimbi. Haufanire kuve nehanya nezve semuenzaniso kutu. Kusimba kweiyi chena yakapararira yekugezera faucet saka inovimbiswa. Kunze kwezvo, iyo nzvimbo iri pasi ndeye anti-kutanga uye, saka iwe uchave unovimbiswa nechitariso chitsva kwenguva yakareba. Iyi yepamusoro-soro yakasviba yakakura yekugezesa faucet yekunyura kwako ichave yekupedzisa kubata kweyeimba yako yekugezera
Easy-kurongedza nhema yakapararira yokugezera faucet
WOWOW dema yakapararira yekugezera faucet iri nyore kuisa neayo nekukurumidza kuisa gwara. Iyo inotonhora uye inopisa mvura inogona nyore nyore kusangana neiyo inokurumidza-yekuisa chinongedzo. Pamudzi wekugezesa faucet uye anobata iwe unenge uchida maburi matatu e1 "-1.5" uye dhizaini rekunyudza rinogona kuita hupamhi hwe0.2 -1.2. Iyo WOWOW dema yakapararira yekugezera faucet inogona kuseta ina kusvika gumi nematanhatu intshi yeumwe neumwe, sekuenderana neyako maitiro. Sezvo dema rakapararira yekugezera faucet iri nyore-kuchengetedza zvakare, WOWOW haatyi kutya kupa makore mashanu-waranti pane yayo chigadzirwa. Chinhu chacho zvakare chakafukidzwa neayo-mazuva-4 kwemahara kudzoka mutemo. WOWOW inovimba dema rayo yakapararira yekugezera faucet uye inogona chete kugutsikana ne16% mutengi kugutsikana! Zvakanakira WOWOW nhema Yakapararira Bathroom Faucet muchidimbu:
 Yakasarudzika yakasarudzika yemhando yepamusoro uye yemazuva ano dhizaini
 Inopa kushanda kwakanaka kunoenderana nezvamunoda
 Inosanganisa esthetics nekuita kwepamusoro
pombi yemukicheni ine dhonza kunze sprayer
mukomboni pombi yekumwaya misoro
pombi yekicheni inodhonza pasi
SKU: 2320300B Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: Nhema, Kuparadzanisa Kubata, Mbambo mbiri
Iwe haugone kukanganisa neiyi seti! Iwo akagadzirwa zvakanyanya uye rinorema basa iro pamutengo wandisina kutarisira. Takatarisa kuImba Depot neLowes kwemabhomba matema esink kutanga. Hapana aive akafanana nekunaka uye ese aive angangoita zvakapetwa kana katatu mutengo. Isu TINOGONA kugutsikana neiyi seti!
Chigadzirwa chikuru cheiyo kukosha, haungazomboziva kuti ichi chaive pasi pe $ 100. Inotaridzika yakanaka uye yakapfava uye ini ndinoda matte kupedzisa. Inokwana zvakakwana mubathroom yangu uye inoshanda chaizvo.
Chaizvoizvo ida iyi pombi! Zvakanaka uye zvinorema pamutengo unonzwisisika! Yakaiswa mwedzi mina yapfuura & hapana matambudziko. Nice matte nhema inowirirana neyedu yekugezera zvishongedzo zvakakwana.
Chaizvoizvo kutaridzika uye pombi uye mapfundo asi iyo yekumisa yekumisa pamusoro inoramba ichichinja ruvara. Ndakadzorera seti yekutanga yandakatenga nekuti yakashandura chena-ish ruvara mushure mekunge tamboishandisa kekutanga. Isu takagamuchira chinotsiviwa uye wechipiri akazviitawo. Ini ndakanyanya bummed. Ini ndinoda kutaridzika kwezvakagadziriswa mune yedu nyowani yekugezera asi handikwanise kuziva zviri kuitika nechimiso. Isu takaedza akasiyana ekugezesa meno uye nesipo kuti tione kana paine mutsauko uye haina. Isu takaedza akasiyana ekuchenesa mhinduro uye zvakare Magic Eraser kuyedza kuachenesa asi hapana chinobatsira nekupisa. Ndingadai ndakanyatso kupa iyi nyeredzi shanu dai izvi zvaisaitika nemadhishi ekumisa ekuvhara!
Hunhu hweiyi tepi yekugezera ingori inotyisa. Ini ndaitogona kutaura kuti yaive yakanyatsogadzirwa uye inorema basa. Ndakatarisa kwese kwese kwerudzi urwu rwekugezesa pombi, asi hapana kana chimwe chazvo kubva senge chaicho chaizokwana musinki yangu yekugezera. Mitengo yezvimwe zvitoro ndiyo nzira inodhura kupfuura iyi. Maitiro ekumisikidza aive akajeka uye zvese zvinoenda sezvazvinofungidzirwa. Maitiro acho akabudirira kwazvo uye nyore zvakare. Iyo yekumisa yekumisa yaive zvakare yakanaka chinhu kuisa mune yakatarwa. Ruvara ndirwo chairo ruvara rwandaitsvaga. Pombi yekugezera inomira zvakanyanya muchimbuzi. Ini ndinokurudzira ichi chigadzirwa kune chero munhu uye iwe unonyatso kunzwa kuti chakakodzera chese cent yawakazvitengera.
Parizvino, chikuru kwazvo! Zvakatorera murume wangu maawa akati kuti aise maviri eaya asi chete nekuti zvigadziriro zvaivemo zvainetsa kubvisa. Ini ndinoda iyo Push drain… zvakanyanya nyore kuti vana vashandise. Iwo maratidziro akapfava mutema sekutsanangurwa uye kukosha kwakadii kwezvaunowana. Kana paine chinoshanduka, ini ndinonyatso kugadzirisa iyi ongororo.
Ndiri kufadzwa kwazvo nechitarisiko, hunyanzvi uye mhando yeiyi faucet seti. Kupedza kwakanaka. Zvese pamusoro peiyi seti kusanganisira kurongedza zvakanyanyisa kunaka kupfuura iwo mutengo mumwe 'wevavaki' mhando inotengeswa kuLowe uye Kumba Depot.
Masucks akakura chaizvo nekusava nematuro kwedu kwatakatenga iyo yakatemwa gomba nhatu muparamende yemarble. Murume wangu akashereketwa kusvika pakufa nezvekuti zvaive nyore sei kuisa, zviri nyore kupfuura vazhinji. Zvakareruka zvekuti akandikumbira kuti nditenge yechipiri yeimwe yekugezera yatiri kuita zvekare izvozvi. Saka ndakadaro! Yakanaka chaizvo uye ine huremu kwairi, haina chintzy zvachose.
Ndakagadziridza imba yekugezera uye mukuita izvi takaziva kuti pombi yedu yekare yakanga yaneta. Isu takaisa iyi nyowani tema pombi uye zvinoshamisa! Inotaridzika ZVAKANAKA, zvaive nyore kuisa, uye ini ndoda iyo Push / pop-up drain!
Pombi iyi yakanaka. Rinomira rakareba asi risina kureba zvakanyanya. Yakagadzirwa zvakaomarara. Izvo zvaisanzwika zvakachipa zvachose. Uku kukosha kukuru uye chigadzirwa chemhando yepamusoro.
Akaisa izvi mune yekugezera kwemwanasikana wangu uye zvakashanda zvakanaka. Nyore kuisa, inotaridzika uye inoshanda zvikuru. Wakatove nehurongwa hwekutenga zvimwe uye kutsiva mamwe mapombi ekugezera neiya imwe chete.
Wakatenga izvi kune remodel yekugezera. Yakanyanya kunaka pombi uye mutengo wacho wakakwana. Kwete fan of popup drainsin asi yakakoshesa iyo yemhando pamutengo uyu.
Mushure mekutenga mubhokisi hombe rekuvandudza vatengesi, murume wangu akawana izvi zvigadzirwa paWOWOW uye vaive vangangoita hafu yemutengo weavo vari muzvitoro. Kuve ini ndakachipa kwandiri, ndakafara kuchengetedza mari, kunyanya kana ongororo dzaive dzakanaka kwazvo. Aya magadziriro muenzaniso wekuti iwe uwane zvakawanda kupfuura zvawakabhadhara. Dhizaini yacho yakanaka uye kurongedza kwanga kwakanaka kwazvo - kwaive sekudzivirira kwenzvimbo semubereki kune wechidiki. Izvo chete zvakashata ndezvekuti imwe yemubato inopedzisa yaive isina kupera simba pamusoro payo. Tichifunga zvese zvakapakurwa, zvaishamisa kuzviona asi pamwe QC yaive ichizorora pane kumhanya ikoko. Neraki kusakwana kuri kudivi rekuseri saka hapana anozozviona kunze kwekunge ndakakotamisa mutsipa wangu kukona isiri yechisikigo. Isu takanga tisina nguva yekutumira seti kumashure. Pombi yacho yakati rebei ichienzaniswa nemapombi akawanda ekugezera ayo akanaka pakuzadza mabhodhoro marefu. Isu tinonyatso kurudzira chigadzirwa ichi kushamwari.
Ini ndatenga iyi yekugezera isu tichave tichigadzirisa mune ramangwana, saka ini ndanga ndisingade kushandisa yakawanda mari pazviri, saka pachinzvimbo chekutenga yepamusoro mhando Moen kana Delta pombi senge ini mune dzimwe dzimba dzangu dzekugezera, ndakatenga izvi Poshi. Handina kuziva kuti ndaizowana iri nani pombi yemhando yehafu yemutengo! Zvese zvinongedzo (kunze kwekukurumidza kubatana zvinobatanidza) ndeesimbi. Haisi kufa-yakakandwa simbi kana chrome yakavezwa mapurasitiki- ipombi yesimbi ine simbi fittings uye zvinongedzo. Izvi hazvisizvo nemabhizimusi emhando yepamberi pamutengo wakapetwa kaviri. Hunhu hwakanakisa, dhizaini yacho yakanaka uye yakapusa kuisa, uye kupedzisa kunogara uye kwakasimba. Rave ratinofarira pombi yekugezera mumba. Yakanga yakarongedzwa uye yakachengetedzwa mushe uye mune isina hunhu mamiriro paakasvika. Chinhu chega chisina kunaka chandingati mirairo yekumisikidza yaigona kuve yakajeka uye yaishaya imwe tsananguro. Kunze kwaizvozvo, uku kutenga chaiko- kukuru kana nguva yasvika yekutsiva mamwe mapombi angu ndinenge ndichitsvaga izvi panzvimbo pekubhadhara iro hombe zita rechiratidzo. Yakakurudzirwa.
Zvakakwana! Handina kumbobvira ndaisa chero chinhu chakadai, uye ndine chokwadi kuti zvakanditorera nguva yakati rebei nekuti yaive kekutanga nguva yandakazviita- asi chaizvo zvaive zvisina kunyanya kuoma kuita neni! Chikamu chakaomesesa kutora pombi yekare. Mukunyatsofara neiyi yakapararira pombi.
Zvakakwana! Handina kumbobvira ndaisa chero chinhu chakadai, uye ndine chokwadi kuti zvakanditorera nguva yakati rebei nekuti yaive kekutanga nguva yandakazviita- asi chaizvo zvaive zvisina kunyanya kuoma kuita neni! Chikamu chakaomesesa kutora bhegi repombi rekare. Mukufara chaiko wI kwakatsiva matatu mapombi ekugezera neaya. Yakanyanya nyore kuisa kana yako gomba iri saizi chaiyo, yangu yanga isiri. Ini ndaingofungidzira kuti vese vaive vakaenzana. Pane imwe nguva ndakachera maburi angu kunze kukuru ndakanga ndisina nyaya. Vanogara pamusoro pesink kumusoro izvo zvinopa kuoneka kwedhishi rakakura. Hazvinamati kure kupfuura zvandaive nazvo.
Takatenga zvisina maturo zvitsva zvakauya nepombi "yemahara", yaive yakachipa saka takafunga kutenga chimwe chinhu panzvimbo. Takaenda kubhokisi hombe rekuvandudza dzimba uye zvese zvaive zvemazuvano tichitsvaga kuravira kwangu uye nemadhora zana nemakumi mashanu. Isu takafunga kutarisa online ndokuwana iyi yehafu nyore izvo zvataizobhadhara. Inotaridzika kunge yakanaka kwazvo necheni yedu yekubatira uye inonzwa yakasimba.
Kwete kuva nerusarura pahunhu hwangu, zvachose, asi ini ndiri mukadzi aida kutsiva bhavhu rangu rekugezera nepombi, ndiri ndega. Ndakatenga pombi iyi, ndakaivhura uye mukati memaminitsi makumi mashanu, yakanga yaiswa pasink yangu nyowani. Nyore Isa!
Aya ndiwo mapombi akanyanya kunaka andauya nawo. Isu takangogadziridza, uye ndakatenga mamwe aive "mazita emhando" asi ndinoshuva dai ndawana zvese izvi. Vakafunga zvese! Chigadzirwa chiri chemhando yepamusoro. Tenga izvi uye hauzombozvidemba.
Ini ndakatenga maviri eaya kuna tenzi wedu bath reno. Ini ndaive nenyaya shoma neimwe seti asi kambani yakazvichengeta bey kudzoka pasina kana dambudziko. Ini ndakanakidzwa kwazvo nehunhu uye kushomeka kwemazambiringa kutaridzika kwemaseti avanonyatso enda nekushongedza kwedu.
Iyi tepi ine yakanaka kwazvo kutarisisa kupera nayo. Iyo yakakombama pombi inogara kumusoro saka pane yakawanda nzvimbo yekuti iwe ugeze maoko ako. Iyo inosanganisirwa yekudonha chidimbu, yakanaka, futi.
Yakanaka chaizvo pombi yakagadzwa. Vanotaridzika kwazvo pane zvangu zvisina maturo zvitsva. Imwe yemapop up draina yakange isipo, uye vatengi vakapindura ipapo ipapo kuti ivo vari kutumira imwe.